Tiorka Aegean Coast | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACôte d'Ivoire Tiorka
Tsindrio ny tanàna eo amin'ny sari-tany mba hamaky ny lalambe Aegean Region, lalam-be sy ny fiara fitaterana an-dàlam-be!
Izmir Metropolitan Munisipaly dia nanokatra foiben'ny fangatahana karatra ao amin'ny Bostanlı Pier. Amin'ny dingana voalohany, ny afovoan-trano, izay tsy maintsy mividy ireo karatra sy ireo karatra 65 taona monja, no hiasa amin'ny karazan-kara-panondro hafa. [More ...]
Ny ben'ny tanànan'i Izmir Metropolitan Tunç Soyer dia nihaona tamin'ny muhtars avy any Bergama. Naharitra dimy ora ny fivoriana. Tunç Soyer no tompon'andraikitra amin'ny tetikasa maro izay ho tsapan'izy ireo ao amin'ny distrika, manomboka amin'ny fitaterana mankany amin'ny fotodrafitrasa, ny fambolena mankany amin'ny tetikasa sosialy. [More ...]
Munzmir Metropolitan Munisipaly İZSU General Directorate dia namita ny sangan'asa teo amin'ny Güzelyalı 19/1 Street, izay mampifandray ny lalana Mithatpaşa mankany Mustafa Kemal Sahil Boulevard, ary nanokatra ny lalana mankany amin'ny fifamoivoizana. Faly amin'ny asa sy ny fahavitana mialoha ny mponina ao amin'ny faritra. Izmir Metropolitan [More ...]
Governemanta Deniz Niresaka tamin'ny mpandeha tao amin'ny garan-dalamben'i Manisa
Nitsidika ny garan-dalamby TCDD Manisa, Governemanta Ahmet Deniz dia nahazo fampahalalana avy amin'ny mpitantana ny andrim-panjakana. Nitsidika ny garan-dalamben'i Manisa Ahmet Deniz, ny governemantan'i Manisa Ahmet Deniz. Avy amin'ny talen'ny Station, Orhan Yıldırım [More ...]
Munzmir Metropolitan Munisipaly dia nametraka ny Loton'i Selvili Underground Parking Lot tany amin'ny Karabağlar. Ny ben'ny tanànan'i Izmir Metropolitan Tun Tun Soyer dia nanokatra ny lavanila fiantsonan'ny fiara ambanin'ny tany Selvili. Nandritra ny lanonana dia nilaza i Tunç Soyer fa mbola hitohy ny fampiasam-bola. Tonga any amin'ny birao [More ...]
Ny fantsom-bolam-bolan'ny Denizli dia voamarina tamin'ny taona 2019
Denizli dia ohatra ny Torkia tamin'ny fitaterana ny fampiasam-bola izay ampiharina Metropolitan Monisipaly, 2019 km asfalta lalana tamin'ny 140 miaraka amin'ny 120 km ny mivaingana hanjaka lalana sy ny sisin-dalana hidin-trano no asa. Fandefasana tanàna Metropolitan [More ...]
Miara-miasa amin'ny sampan-draharaha misahana ny fahasalamana sy ny sampan-draharahan'ny sampan-draharahan'ny sampan-draharahan'ny asa fanarenana ao Manisa Metropolitan dia nanomboka ny fihanaky ny otrikaretina no nitondra ny serivisy fitateram-bahoaka any anelanelan'ny tanàna ao Manisa. An'arivony isan'andro ao Manisa [More ...]
Karabağlar Selvili Underground Parking Lot dia nampidirina androany. Ny ben'ny tanànan'i Izmir Metropolitan Tunç Soyer, izay nanao ny fanokafana dia nilaza fa ankoatry ny fampiasam-bola amin'ny gara, hitohy ny rafitry ny lalamby. Izmir Metropolitan kaominina ao amin'ny Karabaglar Selvili [More ...]
Tohizo ny Museum Museum ..! New Stop İzmir
Ny taratry ny fandrosoana teo amin'ny tantaran'ny indostrian'ny serasera, ny serasera ary ny fitaterana, ny tranom-bakoka voalohany sy ny indostrian'ny Rahmi M. Koç Museum dia mbola manohana hatrany ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-kolotsaina ny ankizy. 70 no voafantina avy amin'ny tranombakoka [More ...]